Baledweyne: Aargo loogu magac daray Sheekh Xasan Barsane oo xarigga laga jaray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baledweyne – Mareeg.com: Magaalada Baledweyne ayaa laga dhisay aargo loo magaca daray Sheekh Xasan Barsane oo ka mid ahaa culumadii caanka aheyd ee dalka Soomaaliya.
Munaasabadan Xarigga looga Jirayay Dhismaha Aargo cusub oo laga taagay Magaalada Beladweyne ayaa waxaa maanta ka qeyb galay Maamulka Gobolka Hiiraan kan Degmada Beladweyne iyo Saraakiisha Ciidamada AMISOM iyo qeybaha Bulshada waxaana Taaladan Cusub loogu magacdaray Sheekh Xasan Barsane iyadoo laga dhigay Xaafada Howlwagaad ee Magaalada Beladweyne.
Dhismaha Aargadan oo bilaabatay 20-kii bishii tobanaad ee sanadkii hore 2013 ayaa waxaa la soo gabogabeyay Maanta, waxaana dhismaha Aargadan waday mudadaasi 4-ta bil ah Ururka Dhalinyarada Garsoor ee ka dhisan Magaalada Beladweyne.
Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Garsoor ee Gobolka Hiiraan C/qadir Maxamuud Ibraahim ayaa ka warbixiyay furitaan Aargada iyo qaabkii ay ka soo mareen mudadii ay howsha wadeen waxuuna u mahadceliyay dhamaan qeybihii gacanta ku siiyay.
Qaar ka mid ah Mas’uuliyiintii ka hadlay Furitaankii munaasabada xarig jarka ee Taalada Sheekh Xasan Barsane oo isugu jiray Maamulka, Odayaal, Dhalinyaro ayaa dhamaantood xusay muhiimada ay u leedahay bulshada taariiqdooda, waxaana ay bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaa dhalinyara ku booriyeen in lagu daydo Dhalintaasi iskood isku qilqaantay oo qabatay waxqabadkaasi muuqda iyagoo intaasi ku daray in taariiqda ay xusi doonto.
Taliyaha Ciidamada AMISOM ee Gobolka Hiiraan, Kornayl Cismaan Dubad oo munaasabad qubad dheer ka jeediyay ayaa ugu horeyn u mahad celiyay Dhalinyara howlshan dhismaha Aargada fulisay waxuuna ku booriyay umada soomaaliyeed in ay tashato oo ay dalkooda dhistaan.
Gudoomiyaha Degmada Beladweyne, Cabdi Bishaar Aadan Rooha ayaa ka sheekeyay Taariiqdii Sheekha Xasan Barsane, waxuuna xusay in dalkan uu lahaa halgamayaal waa weyn loona baahanyahay in dib loo xusay taariikhdooda.
Gudoomiye ku-xigeenka Gobolka Hiiraan ahna ku simaha Gudoomiyaha Gobolka, Max’ed Ibraahim Cali ayaa gabogabadii munaasabada ka hadlay waxuuna sheegay in Xusida iyo weyneynta Dadkii Dalkan u soo halgamay ay haboontahay islamarkaana waqtiyadii hore lagu dhigan jiray Daruusta balse hada ay arrinkaasi meesha ka baxay, ayna ku dadaalayaan in arrimahaasi dib loo soo celin doono.
Horay waxaa u burburtay aargo can ka aheyd magaalada Baledweyne, taasoo uu dhulka ku daray gaari iksu qarxiyey xarrun dowladdu leedahay oo ku dhawed aargada.